Paleoclimatology: astaamaha, ujeeddada iyo muhiimadda | Saadaasha Shabakadda
Mid ka mid ah laamaha cilmiga dhulka ayaa ah Paleoclimatology. Waxay ku saabsan tahay barashada qolofta dhulka, muuqaalka dhirta, diiwaanka lafaha, qaybinta isotopeetiyada kala duwan ee badaha iyo qaybaha kale ee deegaanka ah ee la xiriira go'aaminta taariikhda kala duwanaanshaha cimilada meeraha. Inta badan daraasaddan waxaa ka mid ah baaritaanno taariikhi ah oo ujeeddadeedu tahay in lagu barto dhammaan saameynta ay howlaha aadamigu ku leeyihiin cimilada.
Maqaalkani waxaan kuugu sheegeynaa dhammaan sifooyinka, hawlgalka iyo muhiimadda ay leedahay paleoclimatology.
2 Ujeeddada cillad-biyoodka
3 Dib u dhiska Paleoclimatology
Markaynu ka hadlayno barashada qolofta dhulka, waxaynu ula jeednaa isbeddellada ku yimaadda qaab-dhismeedkeeda iyo qaab-dhismeedkeeda. Xaqiiqda in qaaradduhu ay dhaqdhaqaaqaan sanad kasta waxay ka dhigeysaa cimilada cimilada aag kala duwan booska labaad. Badi daraasadaha ku saabsan cilmiga 'paleoclimatology' waxaa loola jeedaa jiritaanka aadanaha iyo dhaqdhaqaaqyada dhaqaale iyo sida ay u saameeyaan cimilada meeraha. Tusaalooyinka ugu dambeeyay ee daraasadaha ku saabsan cillad-biyoodka waxay ku saabsan yihiin isbeddelka cimilada.
Sidaan ognahay, waxaa jiray isbadalo cimilo oo kala geddisan tan iyo markii dhulkeenna la sameeyay illaa maanta. Isbeddel kasta oo cimilo ah waxaa u sabab ah isbeddelo kala duwan oo ku saabsan halabuurka jawiga. Si kastaba ha noqotee, dhammaan isbeddeladan cimilada waxay ku yimaadeen heer dabiici ah oo u oggolaaday noocyada kala duwan ee dhirta iyo xayawaanka loo qaybiyo adduunka oo dhan si loo abuuro habab la-qabsasho si ay ugu noolaadaan wajiyada xaaladaha cusub. Isbeddelka cimilada ee xilligan dhacaya qarnigan wuxuu ku dhacayaa xawaare la dedejiyey oo aan u oggolaanayn noolaha inay la qabsadaan. Dheeraad ah, waa inaan ku darno saameynta deegaanka ee ka dhasha howlaha aadanaha.
Burburinta nidaamka deegaanka iyo deegaannada dabiiciga ah ee noocyada waa mid ka mid ah sababaha ugu muhiimsan ee luminta kala duwanaanshaha noolaha. Farsamooyinka aasaasiga ah ee sababa isbeddelada iyo kala duwanaanta cimilada waxay ka imaan karaan Dhoofaanshaha Qaaradaha wareegyada wareegga iyo wareegga Dunida. Waxaa la dhihi karaa paleoclimatology wuxuu cimilada waagii hore ka baranayaa tilmaamayaasha cilmiga dhulka. Markaad hesho xogta cimilada hore, isku day inaad muujiso sida heerkulka iyo isbadalkayaasha kale ee jawiga ay ugu soo baxeen muddooyinka taariikheed ee dhulka.
Dhammaan baaritaannada lagu soo saaray daraasadda cimilada hore, waxay xaqiijin karaan in cimilada meeraha aysan weligeed xasilloonayn. Waana in miisaanka oo dhan uu isbeddelayay oo uu ku sii soconayaa maanta wuuna sameyn doonaa mustaqbalka. Cimiladu isbeddel kuma aha oo keliya ficil bini-aadam laakiin sidoo kale dabiici ahaan. Dhammaan isbeddeladani waxay lagama maarmaan ka dhigayaan in la ogaado muhiimadda ay leeyihiin dabeecadaha dabiiciga ah ee isbeddelka cimilada. Sidan oo kale, saynisyahannadu waxay si macquul ah u qiimeyn karaan saameynta dhabta ah ee fallada dadku ay ku leeyihiin xaaladaha maanta jira ee deegaanka.
Waad ku mahadsan tahay daraasadda saameynta deegaanka ee waxqabadyada aadanaha ee cimilada, moodooyin kala duwan oo la saadaalin karo ayaa loo horumarin karaa cimilada mustaqbalka. Xaqiiqdii, sharciga oo ay kujiraan waxqabad kasta oo laxiriira isbadalka cimilada ee hada jira ayaa lagu soo saaray qaab cilmiyaysan oo kusaleysan barashada cimilada iyo isbadalkeeda.
Tobannaankii sano ee la soo dhaafay, waxaa soo ifbaxay aragtiyo kala duwan oo isku dayaya in ay sharxaan asalka isbadalada cimiladeed ee kaladuwan ee meeraha Dunida ku dhacay. Isbadalada cimilada badankood si tartiib tartiib ah ayey udhaceen, halka kuwa kalena ay kadis ahaayeen. Waa aragtidan ayaa ka dhigaysa saynisyahanno badan shaki in isbeddelka cimilada ee hadda socda aysan horseed u ahayn howlaha aadanaha. Qiyaasta ku saleysan aqoonta cilmiga xiddigiska waxay wehelisaa is bedbeddelka cimilada iyadoo ay ku kala duwan yihiin wareegga dhulka.
Waxaa jira aragtiyo kale oo isku xira isbeddelka cimilada iyo isbeddelada ku dhaca howlaha qorraxda. Waxa kale oo jira cadeymo dhawaanahan soo kordha oo isku xiraya saameynta meteorite, dhaqdhaqaaqa fulkaanaha, iyo kala duwanaanshaha ku jira halabuurka jawiga leh isbeddelada adduunka ee la soo dhaafay.
Dib u dhiska Paleoclimatology
Si loo helo fikrad caalami ah oo ku saabsan cimilada taariikhda oo dhan, dib-u-dhiska cimilada ayaa loo baahan yahay. Dib-u-dhiskan wuxuu keenayaa xoogaa caqabado ah. Taasi waa in la yiraahdo, ma jiraan diiwaanno cimilada cimilada oo ka baxsan 150-kii sano ee la soo dhaafay maadaama aysan jirin aalado lagu cabbiro heer kulka iyo kuwa kale ee jawiga ku beddela. Tani waxay kadhigaysaa dib-u-dhiska tirada ah mid aad u adag in la sameeyo. Badanaa, khaladaad kala duwan ayaa la sameeyaa si loo cabbiro heerkulkii hore. Sababtaas awgeed, waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado dhammaan xaaladaha deegaanka ee la soo dhaafay si loo dhiso moodello xoogaa ka sii saxan.
Dhibaatada dib u dhiska Paleoclimatic waxay ku jirtaa xaqiiqda ah in aan si hubaal ah loo ogeyn waxa heerkulka heer kulka uu ku ahaa maaddooyinka badda, dusha sare ee badda, sida qoto dheer ee ay u ahayd, waxqabadka algae, iwm. Mid ka mid ah dariiqooyinka lagu aasaaso heerkulka badda ee la soo dhaafay waa iyadoo la adeegsanayo tusmada UK/37. Tilmaamahan wuxuu ka kooban yahay falanqaynta qashinka badda ee qaar ka mid ah xeryahooda dabiiciga ah ee ay soo saaraan algae-ga midaysan oo alwaax ah. Algae-yadan waxay ku yaalliin aagga saxanka badda. Aaggan ayaa ah halka ay qoraxda qorraxdu ugu dhacdo si saamaxaysa in sawir-qaadis loo sameeyo algae. Dhibaatada ay leedahay adeegsiga tusmadan ayaa ah in qoto dheerida badaha waqtigaas aan si fiican loo ogeyn, xilliga sanadka uu qiyaasi karo, wiishka kala duwan, iwm.
Badanaa waxaa jiray isbeddelo deegaan oo keena jawi aan u dhigmin kuwa hadda jira. Isbedeladaan oo dhan waa la ogaa mahadsanid diiwaanka cilmiga dhulka. Isticmaalka moodelladani waxay u oggolaadeen paleoclimatology inay horumar weyn ka gaaraan fahamkeenna nidaamka cimilada adduunka. Shaki kuma jiro inaan ku mashquulsan nahay isbedelka cimilada tan iyo markii diiwaanka waagii hore ay na tusayaan in heerkulka badda iyo dhirta, isku dhafka jawiga ama badda ay si isdaba joog ah isu beddelayaan wareegyo tobanaan kun oo sano ah.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad waxbadan kaga baran karto paleoclimatology iyo muhiimadiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Isbedelka Cimilada » Paleoclimatology